Tsy tarihan’ny fihetseham-po
“Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao” Sal. 119:105
Misy an’anarivony ireo izay voafitaky ny fihetseham-po manokana sy manao tsinontsinona ny tenin’Andriamanitra. Tsy manorina eo ambonin’ny fanorenana tsy atahorana sy azo antoka izy ireo, dia ny tenin’Andriamanitra. Ny fivavahana miantefa amin’ny voary manan-tsaina dia hanome porofo mitombina ny fahamarinany, satria hiseho amin’ny alalan’ny vokatra miavaka ao am-po sy eo amin’ny toetra izany. Hiseho eo amin’ny fitondran-tenan’izy ireo isan’andro ny fahasoavan’i Kristy. Azontsika anontaniana tsara ireo milaza ny tenany ho nohamasinina hoe hita eo amin’ny fiainanao ve ny vokatry ny Fanahy? Miseho ve ny fahamoram-panahy sy ny tsy miavona am-po izay toetran’i Kristy, ary miharihary ve fa mianatra isan’andro ao amin’ny sekolin’i Kristy ianao, mamolavola ny fiainanao hifanaraka amin’ny modelin’ny fiainany tsy misy fitiavan-tena?
Ny porofo tsara indrindra hanehoana fa afaka hanana fifandraisana amin’Andriamanitry ny lanitra isika dia ny fitandremantsika ny didiny. Ny porofon’ny finoana an’i Kristy tsara indrindra dia ny tsy fahatokian-tena sy fiankinana amin’Andriamanitra. Ny hany porofo azo ianteherana amin’ny firaisantsika ao amin’i Kristy dia ny hanehoana ny endriny. Arakaraka ny hanaovantsika izany no hanomezantsika porofo fa nohamasinin’ny fahamarinana isika, satria aseho ho ohatra eo amin’ny fiainantsika ny fahamarinana. ST, 28 Febroary 1895.